Ojiji na nsogbu dị ugbu a nke iko na -enweghị ọkụ na injin ụlọ/2
1. ụdị na omume nke iko iko na-anaghị agbanyụ ọkụ Dika GB/T12513-2006 “Usoro nnwale ọkụ maka ihe ejiri enyo kpuchie”, a na-ekewa nkebi iko na-egosi ọkụ n'ime ụdị mkpuchi ọkụ na ụdị mkpuchi na-adịghị ekpo ọkụ dịka ọkụ na-eguzogide. , dị ka publ ...
Ojiji na nsogbu dị ugbu a nke iko na -enweghị ọkụ na injin ụlọ/1
Site na mmepe akụ na ụba ngwa ngwa, a na -ewu ụlọ, ọkachasị ụlọ azụmahịa, ka ọ buru ibu ma buru ibu. N'obodo ebe onye edemede bi, a rụrụ nnukwu ụlọ ise nwere ihe karịrị square mita 300,000 n'ime otu afọ. Nhazi mgbochi ọkụ nke nnukwu ụlọ ndị a bụ com ...
Ọnụ ụzọ na ụlọ ọrụ Windows ga -eji ogo ngwaahịa merie ahịa
Ka ọ dị ugbu a, ndị na -azụ ahịa tụkwasịrị akara ahụ ezigbo miri emi, mgbe ịzụrụ ọnụ ụzọ na ngwaahịa Windows nwere ike nwekwuo mmasị na ngwaahịa buru ibu, na nsogbu ahụ ga -eme n'amaghị ama. Mana e jiri ya tụnyere akara ụzọ na windo, iji nweta ntụkwasị obi nke ndị na -azụ ahịa, ọ dị ezigbo mkpa ...
Kedu njirimara nke iko bụ iko na-azọpụta ike?
Njirimara iko iko na-ekpo ọkụ 1, mkpuchi mkpuchi 1) mkpuchi mkpuchi oghere: iko na-azọpụta ike na-anabata usoro kachasị mma nke A+12+A, oghere oghere dịkwa. Data nnwale na -egosi na mgbe oghere dị n'etiti iko efu efu dị 12mm, mmetụta ịzọpụta ike zuru oke bụ ...
Kedu ihe kpatara mgbape na -apụta mgbe agwakọtara iko oghere?
Site n'ịdị mkpa ịchekwa ike na ụlọ China, ikpuchi iko dị ka ngwaahịa na-azọpụta ike na-abawanye na ngwa nke ịrụ ọnụ ụzọ, windo na mgbidi ákwà mgbochi. N'ihi ntakịrị teknụzụ dị ala nke ikpuchi iko iko na atụmanya ahịa sara mbara, ...
Ihe ọhụrụ nka na uto akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga -enyere ụlọ ọrụ Windows na ọnụ ụzọ aka idobe oke ahịa
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ka akụ na ụba ụlọ na -abanye n'oge mgbanwe, ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ na windo na -ebili, na "crossover" na "mgbanwe" na -aghọ isi okwu ahịa. N'ọtụtụ ọtụtụ ndị na -emepụta ihe na ntinye aka nke onye nkịtị, asọmpi a bụ nke ...
Kedu ka ụlọ nke ejiri iko dị obere ike ga -esi nweta ndụ ọhụrụ?
Esemokwu dị iche iche nke iko emeela ọtụtụ nsogbu kemgbe e mepụtara ya. Nke mbụ bụ na ogo iko ahụ abụghị nke a pụrụ ịdabere na ya, ike ya adịghị elu. Na iko agbajikwa ga -emepụta iberibe dị nkọ, dị mfe imebi; Nke abụọ bụ mmetụta griin haus nke iko, nke ga -emegharị ...
Ụkpụrụ ahịa agbanweela ọnụ ụzọ na ụlọ ọrụ Windows ga -adabara na mgbanwe na nkwalite nke Times
Site na mmepe nke The Times na-aga n'ihu, ụkpụrụ ahịa ụlọ na-agbanwe agbanwe na-ama jijiji. N'ọnọdụ mmezigharị akụkụ, ntinye echiche, nkwalite oriri, ụlọ ọrụ na ọnụ ụzọ windo na-echekwa mgbanwe na nkwalite. Otu esi ahọrọ ọdịnihu nke ha ...
Ụlọ ọrụ iko ga -anọrịrị na "agha ọnụ ahịa" nwere oke mma na ọnụ ahịa dị elu dị ka ụkpụrụ
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, “ọnụ ala efu maka ihe niile, oke furu efu” abụrụla ọnọdụ ihere maka ọtụtụ ụlọ ọrụ na mpaghara nrụpụta China. “Agha ọnụ ahịa” bụ iji ụdị asọmpi a na -ahụkarị, ụlọ ọrụ iko abụghị ihe ọhụrụ. Nke a pụtara na ọ nwere ike weta ụfọdụ b ...
Ọnụ ụzọ na ụlọ ọrụ Windows iji mepee ahịa ọhụrụ kwesịrị ịtụle ọnụ ahịa nkewa ahịa
Ka ọ dị ugbu a, mmepe nke ụlọ ọrụ na ọnụ ụzọ windo etoola, mmepe nke ụlọ ọrụ na windo adabala n'ime obere nsogbu. Kedu ka ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ na windo ga -esi nweta ihe ịma aka ụfọdụ na ngalaba mmepe ọhụrụ, ọ dịkwa mkpa ịgbatị ...
Ọ bụ ezie na atụmanya ahịa nke ọnụ ụzọ ahaziri na Windows dị mma, ụlọ ọrụ kwesịrị imebi oghere mmepe
N'oge a, mgbanwe nke ụlọ ọrụ na windo abụghị naanị ihe ịma aka, kamakwa ohere maka mgbasawanye nke mmepe nke ụlọ ọrụ windo na mgbasawanye nke ahịa maka ndị na -ere ahịa. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ na windo chọrọ ịrụ ezigbo ọrụ na transformat ...
Iko nchekwa na -aghọ ntụpọ ọhụrụ na -enwu n'ọnụ ụzọ osisi siri ike
Kichin ma ọ bụ ụlọ mposi ụdị oghere a pere mpe, ọkụ adịghị ebe dị mma, na -ahọrọkarị ọnụ ụzọ na -atụ aro ịhọrọ ọnụ ụzọ osisi siri ike na iko, iji hụ na ọkụ dị n'ime ụlọ, mana nwekwara ike ịbawanye n'ọdịdị nke osisi siri ike. ọnụ ụzọ. Mana ọ bụ obere iko a nwekwara ike ...